အခြားတစ်ခုအတွက် Amarok Splash ကိုပြောင်းပါ Linux မှ
အခြားတစ်ခုအတွက် Amarok Splash ကိုပြောင်းပါ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, applications များ, GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ရက်အနည်းငယ်ကငါတို့စာဖတ်သူ (nano) ငါ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြားမေးခွန်းများကိုမေးတယ် KDE, အကြံပြုချက်များ လဲ tutorial ကိုယ်လုပ်နိုင်တာက KDEဒါကသူတို့ထဲကတစ်ခုပါ
Amarok, KDE အတွက်ကစားသမားသည် (ကျွန်ုပ်အမြင်တွင်) လွန်ခဲ့သောအချိန်က၎င်း၏အထွတ်အထိပ်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အခိုက်အတန့်ရှိခဲ့သူ၌နောက်လိုက်များနှင့်ပရိသတ်များစွာရှိသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ Amarok Splash ကိုပြောင်းပါ.
ကောင်းပြီ ... ဒီမှာအဆင့်တွေ။
1. Terminal ကိုဖွင့်ပါ၊ ၎င်းတွင်အောက်ပါကို ရေး၍ နှိပ်ပါ [ရိုက်ထည့်ပါ]:
2. သင်၏စကားဝှက်ကိုတောင်း။ ရိုက်ထည့်ပါ [ရိုက်ထည့်ပါ] နောက်ထပ်တစ်ခါ။
3. အဆင်သင့် !!!
အခုဖွင့်လို့ရပြီ Amarok, သင်သည် Splash ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်🙂
ငါပြသသောအရာကိုအစားအခြားအရာတစ်ခုခုကိုသင်ထားလိုလျှင်၎င်းကိုဖိုင်တွဲထဲသို့ကူးယူရုံသာဖြစ်သည် / usr / share / apps / amarok / images / အမည်ဖြင့် "splash_screen.jpg«, ထိုအမည်ဖြင့်တည်ရှိသည်သောအရာကိုသူတို့အစားထိုးသို့မဟုတ် overwrite ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်။
ငါသည်သင်တို့ကိုပြသသော splash ၏အလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ricardorivau ဌဒီအလုပ်အတွက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်😀
PD: ပိုပြီးမျိုးစုံသည် Amarok ဒီမှာသင်ရှာနိုင်သည် KDE-Look ပေါ်ရှိ Amarok Splash
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » အခြားတစ်ခုအတွက် Amarok Splash ကိုပြောင်းပါ
ငါ anime နောက်ခံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအဲဒီကွန်ပျူတာက Arch ကိုထားဖို့မြည်းကိုမပေးဘူးလားဆိုတာငါကြည့်နေတယ်
သင်ရှာဖွေနေသည်မှာ Windows HAHA ကိုအသုံးပြုရန်တရားမျှတမှုဖြစ်သည်။
ဟားဟားဟားဟင်ဒါလုံးဝဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဟဲဟဲ…ငါ Amarok ကိုမသုံးဘူး၊ အဲဒါကငါ့ကိုကလီမန်တိုင်းတာသုံးစွဲတာထက်နှစ်ဆလောက်ပိုတယ်။
ငါ Emos မကြိုက်ဘူး, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
wow သူ့ကိုမသိခဲ့ပါ, သူကအတော်လေးအေးမြ😀
အလွန်ချောမော, အနည်းဆုံး hehe သင်တို့အဘို့အခဏစွန့်ခွာပါလိမ့်မယ်
ငါလုပ်ခဲ့သော RT များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
multiboot pendrive တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်